Ukuthengiswa kuthotho lweRedmi K20 sele kuwele iiyunithi ezisisigidi | I-Androidsis
Ukuthengiswa kuthotho lweRedmi K20 kwawela iiyunithi ezi-XNUMX zezigidi kwinyanga yokuqala
Yeyiphi ifowuni yeXiaomi engathengisi kakuhle xa unyawo lwakho luthengisa? Impendulo yalo mbuzo ayinakuba "ayikho". Umvelisi waseTshayina ubonakala ngathi unefomula yokwenza ukuba nganye kwiziphelo zayo ibe yimpumelelo kwintengiso kwaye, ekugqibeleni, ezo zothotho lweRedmi A zikuqinisekisile.
Abanye abaye boom ezivenkileni zezo zikoluhlu lweRedmi K20. Ezi ngoku ziqhayisa inani elikhulu labasebenzisi ukusukela oko bamiliselwa kutshanje, kwaye amanani abo okuthengisa abonakalisiwe ukuqinisekisa oku.
Uthotho lweRedmi K20 luthengise ngaphezulu kweyunithi yesigidi ukusukela oko lenziwa igosa ngoMeyi 28 e-China! Oku kutyhilwe nguDonovan Sung, iSithethi seHlabathi kunye noMlawuli weXiaomi, ngoshicilelo alwenzileyo ngetwitter.
Iindaba ezimnandi, Abalandeli bam. Ndonwabile ukwazisa ukuba ukuthunyelwa kwe # RedmiK20 uthotho lubethe iiyunithi ze-1M kwinyanga yokuqala! ?
Enkosi kubalandeli bethu beMi ngenkxaso yakho! ❤️#Imvelaphi #InnovationForEveryone pic.twitter.com/lCpkOSrJdC
-Donovan Sung (@donovansung) Julayi 1, 2019
Masikhumbule ukuba e-China nase-India-ayikamiselwa kweli lizwe liphelileyo-isibini see-smartphones ezenza uthotho, ezizezona Redmi K20 y I-K20 Pro, bagcina la magama afanayo. Kodwa kwezinye iimarike, ezinje ngeYurophu, bayazitshintshela iXiaomi Mi 9T kunye neMi 9T Pro.
I-Redmi K20 iza nescreen se-6.39-intshi ye-FullHD +, iprosesa Snapdragon 730 I-octa-core ene-Adreno 618 GPU, i-6 GB ye-RAM, indawo yokugcina yangaphakathi ye-64 okanye i-128 GB, ibhetri yesikhundla se-4,000 mAh, i-48 MP + 13 MP + 8 MP yekhamera kathathu kunye ne-camera sensor 20 megapixel selfie.
I-Redmi K20 Pro ibethwe kwangoko e-China
I-Redmi K20 Pro, yenxalenye yayo, ixhotyiswe ngescreen esifanayo, ibhetri kunye necandelo lokufota elinikwa ngumninawa wakhe omncinci, kodwa eneqhayiya iprosesa enamandla ngakumbi: Snapdragon 855 Nge-Adreno 640 GPU. Ukongeza, ine-6/8 GB ye-RAM kunye ne-64/128/256 GB yendawo yokugcina yangaphakathi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Ukuthengiswa kuthotho lweRedmi K20 kwawela iiyunithi ezi-XNUMX zezigidi kwinyanga yokuqala
Ewe bafuna nje ukulungisa UKUSILELA OKOYIKEKAYO KUNYE NEZIBONELELO ZOKUGQIBELA zombini kule nto kunye nomzalwana othengisa kakhulu, i-MI 9T, engakwaziyo ukusebenza ne-Android Auto edityaniswe emotweni.
Masibone ukuba banika inkcazo ubuncinci bengxaki kwaye bayilungise kwangoko, kungenjalo uya kufumana iirekhodi zembuyekezo.
Ukuphakanyiswa kwe-veto kuHuawei kuya kuchaphazela kuphela iimveliso zayo eziphambili
Isamsung iyavuma ukuba iGolden Fold yayingakulungelanga ukwaziswa